आम्दानी दिने समयमै मर्न थाल्यो अलैंची - Nayabulanda.com
आम्दानी दिने समयमै मर्न थाल्यो अलैंची
नयाँ बुलन्द २८ श्रावण २०७६, मंगलवार २०:२६ 133 पटक हेरिएको
इलाम : इलाममा लगाइको अलैंची मर्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन् । केही वर्षअघि लगाइएको अलैंचीको बोट मर्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका हुन् । खोल्साको कालो सुन भनेर चिनिने अलैंचीको मुख्य उत्पादन हुने समयमा रोग लागेर मर्न थालेपछि चिन्ता बढेको किसान बताउँछन् ।
दाम महंगो भएकै कारण कालो हीराको समेत उपमा पाएको अलैंचीको फूलमा रोग लाग्न थालेपछि किसानहरू निरास बन्न थालेका छन् । यो सिजन फूल फूलेर फल लाग्ने समय हो । फल लाग्ने समयमै बोट मर्न थालेको किसानहरू बताउँछन् । स्वस्थ फल रातो तथा कलेजी रंगको हुन्छ । तर दाना कुहिएर कालो भएको अलैंची किसानहरूको भनाइ छ । सुकाउँदा यसको रङ कालो हुन्छ तर काँचो अलैंची नै कालो भएपछि अलैंची मासिएको संकेत पाइएको किसान मनु सापकोटा बताउँछन् ।
अलैंचीमा छिर्के, फुर्के रोग, गानो कुहिने रोगसँगै फैलिएको झाँग सुक्ने रोगका कारण किसानका बगानमा समस्या देखिन थालेको छ । करिव एक दशक अलैंची मासिएको थियो । त्यसपछि पुन किसानले अन्नबाली लगाउने बारीमा नै अलैंची लगाएका थिए । त्यसले पनि मुख्य आम्दानी दिने बेला भएपछि मासिएको भन्दै किसान यसको पनि विकल्प खोज्न थालेका छन् ।
धान, मकैलगायतका बालीको सट्टा लगाइएको अलैंचीबाट निकै ठूलो आश लिइएको भए पनि अब यसको विकल्प खोज्न थालेको सापकोटाले बताए । उनले अब अलैंचीबाट खासै फाइदा लिन नसक्ने भन्दै अलैंची मासेर अन्य खेती गर्ने सोच बनाएको बताए ।
रोगको प्रकोप नियन्त्रणका लागि इलामको फिक्कल, पान्दाममा अलैंची विकास केन्द्र स्थापना गरे पनि उक्त संथाले किसानका लागि सहयोग नगरेको किसानको गुनासो छ । संस्थाले अलैंचीसम्बन्धी अध्ययन, तालिम, बीउ विरुवा उत्पादन तथा वितरण र प्राविधिक सेवा पु-याउँदै आएको अलैंची विकास केन्द्र फिक्कल इलामका प्रमुख पदम अधिकारी बताउँछन् ।
सजिलो खेती र राम्रो मूल्य पाउने भएकाले प्रायः किसानले अलैंची खेती गर्दै आइरहेको भए पनि अव भने यसको साटो अन्य खेती गर्ने सोच बनाउन थालेका छन् । हाल अलैंचीको मूल्य प्रतिमन २६ हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म रहेको इलाम देउमाईस्थित मंगलबारे बजारका ब्यापारी मातृका घिमिरेले बताए । पूर्वाञ्चलका पहाडी जिल्लाबाट सुरु भएको अलैंची खेती देशका विभिन्न जिल्लामा विस्तार हुँदै गएको छ । नेपाल सरकारले २०३९ सालमा पूर्वाञ्चलका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुम जिल्लालाई अलैंची विकास क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर त्यसपछि अलैंचीलाई जोगाउने खालका कार्यक्रम अघि सार्न नसकेका कारण किसानले लगाएको अलैंची मासिँदै गएको छ । हालसम्म कुनै पनि निकायबाट सहयोग पाउन नसकेको किसान घनश्याम खतिवडा बताउँछन् । उनले अलैंची धेरै फलाउन अथवा रहेको अलैंचीलाई निरोगी बनाउनका लागि कुनै पनि सहयोग नपाएको बताए ।
जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा अलैंची खेती हुन्छ । त्यसमध्ये पनि माईजोगमाई गाउँपलिका र सन्दकपुर गाउँपालिकामा बढी खेती हुने गरेको छ । यसको खेती सामुन्द्रिक सतहबाट ७०० देखि २१ सय मिटरसम्ममा हुने गरेको छ । यति धेरै स्थानमा हुने अलैंची खेती जोगाउन सरकारले किसानलाई आवश्यक सहयोग गर्नु गर्ने उनीहरूको माग छ ।
प्रथम सूर्योदय नगर पर्यटन महोत्सव सकियो
किरात धर्मगुरु लिङदेनको ६६ औं जन्मोत्सव भव्य रुपमा मनाईयो (फोटोफिचर सहित)
डा. गोपाल गुरुङको स्मृतिमा रक्तदान
फाक्तेप युथक्लबद्वारा विरामीलाई रकम प्रदान, हरेक क्षेत्रमा सहयोग
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान दोकानडाँडामा
केराका ४० भन्दा बढी परिकार !
dhunga baluwa mangsebung 8-20
ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
अभिभावकको स्मृतिमा पाठ्य सामाग्री
तीनै तहको सरकारबीच तालमेल आवश्यक : उपप्रधानमन्त्री पोख्रेल
हरियो सुनको जिल्ला इलाम !